Honduras na-eme mkpọtụ njem nlegharị anya nke ndị ọbịa mba ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Mmelite nke Njem njem » Honduras na-eme mkpọtụ njem nlegharị anya nke ndị ọbịa mba ụwa
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ gbasara Honduras • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • News • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Dulọ ọrụ njem nleta nke Honduras (IHT) kwupụtara taa ọkwa mgbasa ozi ọhụụ kachasị ọhụrụ nke gosipụtara ọtụtụ ọdịiche dị na mba ahụ na ihe niile ọ na-enye ndị njem nleta mba ụwa ịchọpụta. Igosiputa vidiyo nkeji abuo nke na eme ndi njem njem njem nke kachasi nma na Honduras, mgbasa ozi dijitalụ na-ezube iji bulie mmata nke oma ma kuziere ndi njem nke otutu ihe omuma ha ghuta ha.
Ihe mgbasa ozi kachasị ama ama, vidiyo nke ụlọ ọrụ Saatchi & Saatchi dere ma dezie, na-agbaso otu nwa okorobịa aha ya bụ Henry bụ onye na-eleta Honduras na mbido mmiri na mba Islands a ma ama. Onye ya na ya na-egwu mmiri na-egosiputa ya n'ọgba Honduras na Henry wee banye njem na-adịghị akwụsị akwụsị na mba ahụ, na-achọpụta na enwere ihe ịchọpụta mgbe niile. Ọ na-eleta akara ngosi akara ngosi nke mba ahụ ma zute ndị obodo nabatara wee gosi ya ebe ọ ga-aga Honduran. Site na ịnụ ụtọ ọhụụ ọhụrụ, Honduran toro kọfị na Marcala na ịgagharị na Copán Ruins, na-esite na La Campa na nnụnnụ nnụnụ na Río Plátano Biosphere Reserve, Henry na-anwa ime ya niile. N'ikpeazụ, ozugbo ọ banyere ụgbọ elu ọ laghachi n'ụlọ ma buru ụzọ nwee afọ ojuju n'echiche bụ na ọ nyochara Honduras niile, onye ọrụ ụgbọ elu ahụ chetaara Henry na e nwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ. O kpebiri ibi na Honduras iji hụ ya nke ọma, ya mere aha mkpọsa ahụ bụ "Can nweghị Leavehapụ Honduras Na-enweghị Knowingmara Honduras."
Ezubere mgbasa ozi anyị kachasị ọhụrụ iji gosi Honduras n'ụwa niile na ịma mma ya na ịma mma ya niile. Obodo anyị na-etu ọnụ ezigbo ahụmịhe niile, vidio a na-egosipụtakwa ihe ngosi dị egwu nke ihe ịtụnanya a na-amaghị ama na-eche ka ndị njem chọpụta ya. "Obi siri anyị ike na site na mkpọsa a, anyị ga-aga n'ihu na-eme njem nlegharị anya nke Honduras, na-eme ka anyị pụọ iche na ebe ndị ọzọ gbara agbata obi."
A ga-agbasa mgbasa ozi njem nlegharị anya ọhụrụ site na mgbasa ozi mgbasa ozi na site na mgbalị mmekọrịta ọha na eze, na-elekwasị anya ndị na-ege ntị na North America, Central America ma họrọ ahịa Europe.
mara amara mkpọsa mkpọsa ọgba Central America kọfị na-akpali nkuku digital ngosi amaba di iche iche mmiri mgbalị European ahụmahụ ma ama egosi onye na-eje ozi ụgbọ elu Henry home Honduras ndị njem mba ụwa ndị ọbịa mba ụwa ịme agwaetiti njem LA akara ala ulo oru ahapụ obodo ejike ahịa etiti onye ozi mara mma aha ya bụ njem ọhụrụ nkwụsị North North America -enye onye nwere mmekọrịta ọhaneze mmekọahụ idobere ihe ngosi -elekọta mmadụ elekọta mmadụ media -anọ Kwụsị ezubere iche aha IWU agagharị mgbasa ozi njem nleta ngalaba njem akụ amaghị v video nleta ihe ebube -eto eto YouTube